एनसेलको ब्रम्हलुट, कर छली र नेताहरुदेखि न्यायधीशसम्मको सेटिङ : भिडियोसहित - Samajbad
बिहि, अशोज ८, २०७७
एनसेलको ब्रम्हलुट, कर छली र नेताहरुदेखि न्यायधीशसम्मको सेटिङ : भिडियोसहित
in भिडियो रिपोर्टिङ्ग, विशेष
असोज ३, काठमाडौं : मिति २०५८ असार ७ गते नेपालमा स्पाईस नेपालको नामबाट दर्ता भएको टेलिकम कम्पनी हालको एनसेलले नेपालमा ब्रम्हलुट मच्चाएको भन्दै त्यसको चौतर्फि विरोध भईरहेको छ । यसको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रेनल्ड होल्डिङ स्थापना गरिएको थियो । ४ जुलाई २००१ मा नेभिस बिजनेस कर्पोरेसन अर्डिनेन्स जुन १९८४ मा एनभीसीओअन्तर्गत दर्ता भएको यो कम्पनीसँग प्रतिएक डलर मूल्यका एक लाख एक हजार कित्ता सेयर रहेको थियो । रेनल्ड होल्डिङ्सको १०० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपालले होल्ड गथ्र्यो । त्यसको पनि १०० प्रतिशत सेयर नेदरल्यान्डको टेलियासोनेर एसिया होल्ड गथ्र्यो । त्यसको सेयर दुईवटा कम्पनीमा विभाजित थिए । पहिलो टेलियासोनेरा यूटीए कम्पनी र दोस्रो एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी थियो ।
पटक पटक स्वामित्व परिवर्तन तर लाभकर बुझाईएन
मिति २०६७ सालमा यो कम्पनीएनसेल नेपालमा परिवर्तित भयो । त्यसको केही बर्ष पछि अर्थात् वि. स. २०७२ चैत्र महिनामा टेलियासोनाराले एनसेललाई मलेशियाली कम्पनी एक्जिएटालाई करिब एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयामा बिक्रि गयो । जसको टेलियासोनाराले ३५ अर्ब लाभकर बुझाएन । बरु त्यसको सट्टामा टेलियासोनाराले टेक्स अफ हेवनमा अर्को कम्पनी खडा गरेर ३५ अर्ब पचाउने प्रयत्न गर्यो । एनसेलले पनि पुँजीगत लाभकर बुझाउने आफ्नो दायित्व नभएको बतायो तर सर्वोच्च अदालतले मिति २०७३ बैशाख २९ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन निर्देशन दियो । लाभकर नबुझाउन एनसेलले दुई बर्षसम्म अनेकन तिकडम गर्यो । अन्तत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशसहित ५ जनाको पूर्ण इजलासले मिति २०७५ माघ २३ गते एनसेललाई ७ दिनभित्र कर बुझाउन निर्देशन दियो तर एनसेल राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको घर धाउन थाल्यो ।
विप्लवको हमला र अदालतकै आदेश उल्ट्याईयो
त्यो अघि एनसेलले कर नतिरेको भन्दै पटकपटक एनसेलमाथि हमला गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फेरी एनसेलको मुख्यालयमा हमला गर्यो । त्यसपछि एनसेललाई कर बुझाउन चौतर्फि दबाब बढ्यो । अन्तत सार्वेच्च अदालतका दुई जना न्यायधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुंगानाले प्रधानन्यायधीशसहित ५ जनाले गरेको आदेशलाई उल्ट्यो । जुन आदेशले एनसेललाई करिब १९ अर्ब राजश्य छुट दियो । जसको चौतर्फि विरोध पनि भईरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमभन्दा तीन गुणा महंगो सेवाशुल्क
नेपाल टेलिकम र एनसेलका ट्यारिफ रेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने मोबाइल सेवा वा डाटा सेवा दुवैमा लगभग ३ गुना फरक परेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकम टु नेपाल टेलिकम र अन्यमा प्रतिकल केवल रु. १ मात्र पर्छ । देशभित्र कुनै पनि स्थानमा यसमा रोमिङ छैन । तर एनसेलबाट एनसेनको प्रतिकल रु. १.ं९९ छ । अझ एनसेलबाट अन्यमा एकदमै फरक छ । एनसेल टु एनटीसीमा रु. २.५३ लाग्छ । यूटीएलमा रु.२.८३ लाग्छ । साथै एनसेलमा प्रत्येक जिल्ला र अञ्चलमा रोमिङ लगाइएको छ ।
थप ब्रम्हलुट !
एनटीसीबाट एनसेल वा एनसेलबाट एनटीसीमा क्रमशः १ करोड ३४ लाख ६२ हजार ९०७ र १ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३१ जना ग्राहकहरूले कम्तीमा दिनमा ५ पटक मात्र फोन गरे भने पनि एनटीसीको ट्यारिफ रेटको तुलनामा एनसेलले २ करोड बढी कमाउँछ । त्यस्तै एनसेलले प्याकेजका नाममा झनै ब्रह्मलुट गरेको छ । उसले एकदिने, सातदिने र एकमहिने (तीसदिने) प्याकेज ल्याएको छ । एकदिने प्याकेजलाई २४ घन्टाभित्र सक्नुपर्छ । अन्यथा कोल्याप्स हुन्छ । यी प्याकेजहरूलाई वैकल्पिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ । फेसबुक भए भ्वाइस कल हुँदैन । एसएमएस भए अर्को हुँदैन । यसकारण ग्राहकको प्याकेज खरिदको पूर्ण रकम खर्च हुँदैन । त्यसले गर्दा ग्राहकको ठूलो रकम एनसेलले लुट्ने गरेको छ । डाटा चलाउँदा र प्याकेज कोल्याप्सबाट एक दिनमा १० करोडबराबरमा लुट गरेको छ । यसरी एक दिनमा २० करोडबराबरको लुटलाई यहाँका राज्य सञ्चालकले लुकाइदिएका छन् । हेर्नुस् भिडियो ।
युवाहरु छिप्पिनु अघि विकासको तीब्र गतिको दौड पूरा गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री